कहिले पाउँछन् उखु किसानले भुक्तानी ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
कहिले पाउँछन् उखु किसानले भुक्तानी !
नवलपरासी पश्चिम, १७ जेठ- नवलपरासीमा उखु क्रसिङको सिजन ४ महिना वितिसक्दा पनि प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले किसानका ४५ करोड रुपैया बक्यौता अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैन ।
जिल्लामा लुम्बिनी चिनी उद्योग, बाग्मती चिनी, इन्दिरा चिनी र मोहिनी चिनी उद्योग गरेर चारवटा ठूला चिनी मिल छन् । जसमध्ये लुम्बिनी चिनी मिलको ३ देखि साढे ३ करोड रुपैया किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ भने इन्दिरा सुगर मिलको सत्र देखि अठार करोड र बाग्मती सुगर मिलको २३ देखि २४ करोडसम्म भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नवलपरासी उखु कृषक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
यसैगरी मोहनी सुगर मिल भने ४ बर्ष देखि उखु खरिद गरेको छैन । चिनी मिलले उखु कृषकलाई समय समयमा उचित मूल्य भुक्तानी नगर्दा किसानहरूले वैकल्पिकमा केरा खेती गर्न आकर्षित हुन थालेका छन । नवलपरासीमा साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुदै आएको छ तर अर्को बर्ष भने उखु उत्पादन अझै घट्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
जिल्लामा करिब १३ हजार घरपरिवार उखु खेतीमा आबद्द रहेका अनुमान छ । जिल्लाको अधिकांश दक्षिणी भेगका किसान उखु खेती गर्छन् । उखु बालीलाई २०७२ सालमा राष्ट्रिय बालीको रुपमा घोषणा भइसकेको छ ।
तैपनि अन्य नगदे बाली सरह उखु बालीलाई राज्यबाट अनुदान र सुविधा नहुदा थप किसानहरु मारमा पर्ने गरेका छन । उखु कृषक समितिका अध्यक्षका अनुसार कृषक प्रति सरकारको उदासिन र स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारलाई दबाब नदिदासम्म किसानलाई चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको बताए । अर्को तर्फ किसानलाई धान लगाउने सिजन सुरु भइसकेको छ किसानलाई धान मल किन्न धाउधाउ भएको छ । चिनी मिल भने भुक्तानी रोकेर झन समस्या थप्ने गरेको छ ।
पैसा नहुदा किसान खेता जोताउन देखि धान मल किन्न सकेका छैनन् । यसबर्ष उखुको सिजन बितिसक्दा पनि सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको थिएन । किसानहरुले ३ सय देखि साढे ४ सय प्रति क्विन्टल बिचौलिया संग बेच्ने गरेका थिए । गतबर्ष उखुको मूल्य साढे पाच सय थियो । यसैगरी नवलपरासीमा ५० भन्दा बढि भेली बनाउने साना क्रसर उद्योग छन ।